Shuruudaha iyo Xaaladaha - Etourism
Dhammaan qiimayaashu waa qiimaha saafiga ah mana jiraan komishan. Haddii aad u baahan tahay qaansheegta canshuurta, canshuurta 10% ayaa lagu dari doonaa. Qiimaha ayaa laga soo xigtay qiimaha tikidhada iyo kharashyada kale ee waqtigii la dalbaday sidaa darteed qiimaha oo dhan waxaa dib loogu cusboonaysiinayaa waqtiga ballanta.
Dalxiiska Co., Ltd waxay leedahay xuquuqda lagu beddelo qiime kasta oo dalxiis ah iyadoo lala socdo ama ogeysiis la'aan ah iyadoo la kordhinayo qiimaha hoteellada, duullimaadyada hawada, qiimaha gaadiidka, iyo is-beddelka heerka sarrifka. Kordhinta xilliga xilli sare ayaa lagu dabaqi doonaa qiimaha safarka, hoyga, iyo gaadiidyada taariikhaha cayiman; heshiisyada, ciidaha, ciidaha, ama dhamaadka usbuuca.
A. Deebaajiga Amniga
Sida deebaaji ah, 10% wadarta qiimaha dalxiiska waa in lagu bixiyaa gudaha 3 maalmood ka dib xaqiijinta.
B. Lacagta Hadhaaga
Hadhaaga Balance waa in la bixiyaa hal usbuuc ka hor intaanu dalxiisku bilaaban. Haddii deebaajiga iyo
dheelitirka bixinta lama bixinayo, Boos celinta waa la burin doonaa.
Sicirradu waxay dhaqan gelayaan hal sano laga bilaabo bisha maarso ee sanadka hadda ah illaa Febraayo sanadka dambe haddii aysan jirin ogeysiis dheeri ah.
Boos celinta waxaa oggol Fakis iyo emayl oo keliya
E Dalxiiska Co., Ltd waxay sida ugu dhaqsaha badan ugaga jawaabi doontaa Email ama Fakis.
Waxaan iskudayeynaa inta karaankeena ah inaanu u waafajino codsiyadaada sida loo codsaday.
A. Bixinta buuxda waa in lagu xisaabiyaa koontada bangigeenna ilaa taariikhda ay ka muuqato qaan-sheegashada aan dirnay. Haddii aadan buuxinin taariikhda loo qabtay, ballansashada ayaa si otomaatig ah loo baajin doonaa.
B. Haddii aad ku bixinayso kaarka amaahda ama Paypal, waxaa jiri doona lacag dheeraad ah oo ah 5% oo laga qaadayo qiimaha jadwalka.
C. Jeega qabashada bangiga ama xisaabta khasnajiga si loogu diro xafiiskayaga.
D. Shirkadda ama jeegaga shaqsiyeed lama aqbali karo.
Joojinta heshiisyada la xaqiijiyay, lacagta kansashada ayaa laga yaabaa in lagu soo dallaciyo si ku habboon.
A. Lacag celin
Kharashaadka safarka ee aan loo isticmaalin dhacdada, looma soo celin doono macmiilka Macaamiisha baajiyay Boos celinta ayaa bixin doona khidmadaha bangiga ee soo-celinta.
Kharashaadka kansalka waxaa loo adeegsan doonaa joojinta hoteelada, gawaarida, maqaayadaha, shirkadaha diyaaradaha iyo wixii la mid ah. Ujrada ka-noqoshada ayaa la dallaci doonaa sida hoos ku cad.
1) Marka bixinta deebaajiga: 10% wadarta qiimaha safarka.
2) Joojinta 15 ~ 8days ka hor booqashada loo qorsheeyay: 30% wadarta qiimaha safarka.
3) Joojinta 7 ~ 3days ka hor booqashada loo qorsheeyay: 50% wadarta qiimaha safarka.
4) Joojinta 2days ka hor ama maalinta booqashada loo qorsheeyay waxay bilaabataa: 100% wadarta qiimaha safarka.
* Fadlan la soco in aanaan masuul ka ahayn 5% lacagta komishanka mushaharka.
- Xitaa lacag celinta 100%, ma awoodi doontid inaad lacag soo celiso ujrada komishanka mushaharka ee 5%.
E Dalxiiska Co., Ltd mas'uul kama aha khasaaraha lama filaanka ah, burburka, shilka, iyo isbeddelada waqtiga.
Intaas waxaa sii dheer, jadwallada waa la beddeli karaa sida ugu wanaagsan ee macaamiisha loogu qanco ama iyadoon ogeysiis dambe la helin.
E Dalxiiska Co., Ltd waxay diyaarisay adeegga dalxiis ee ugu wanaagsan iyo jadwalka dalxiis.
Booqashooyinka badankood waa la heli karaa sannadka oo dhan, hase yeeshee barnaamijyada sida Ski, Rafting, Bird Watching ayaa ku xaddidan sabab xilliyeedka. Dalxiiska Panmunjeom ma shaqeynayo Axadaha iyo fasaxyada Kuuriya iyo USA, taariikha dalxiiska waxaa la siiyaa ka dib tixgelinta amniga ee Taliyaha Qaramada Midoobay.
Ilmaha kayar 11 looma ogola inuu ku biiro. Dalxiiska DMZ (Xerada 3rd) ayaa la xiraa Isniinta.
Adeegga oo dhan waxaa lagu bixin doonaa Ingiriisiga khibrada leh, Jarmalka, Shiinaha, Faransiiska, Talyaaniga, Thai, Isbaanishka, Jabaaniyiinta ama hagida ku hadla Afka Ruushka.
Dhamaanteen hadafkeenu waa in aan raacno maalinba maalinta ka dambeysa, inkasta oo ay jirto heer ku dhisan dabacsanaan oo aan kula xisaabtami karno himilo kasta ama danaha gaarka ah ee macaamiisha ay leeyihiin.
Mararka qaarkood, sababao kala duwan awgood, sida caadiga ah dib u dhacyada duulimaadka iyo isbeddelka jadwalka ama matxafyada ayaa ku dhow, waxaa laga yaabaa in isbeddel yar lagu sameeyo qabanqaabada.
Boos celinta qolka oo dhan waxay kuxirantahay qolalka caadiga ah ilaa uu jiro amar gaar ah mooyee.
Qolalka oo dhan waa in horay loo sii ballansadaa isla boos celinta isla maalintaasna suurogal ma aha.
Haddii ay dhacdo in qolalka aan la heli karin, guryo la mid ah ayaa la beddelayaa.
Farqi kasta oo nooc ah iyo qiimahoodu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran doorashadaada.
Booqashada xirmada waxay ku saleysan tahay laba qof hal qol.
E Dalxiisyada Co., Ltd waxay had iyo jeer diyaarsataa garsoorayaal aamin ah oo aamin ah darawallo khibrad leh oo sharaf leh, oo ku qalabeysan qaboojiyeyaasha iyo kuleyliyaha.
Qaacidooyinka gaadiidku waxay ku xiran yihiin shuruudaha si isku mid ah loogu heshiiyey, si kastaba ha noqotee, waxaan macaamiisheena siinaa gaari ama van (1-2persons), gaari xamuul ah (3-8persons), bas yar (8-15persons) iyo mooto (15-40persons).